နှုတ်ဆက်ခြင်း | ပြည့်စုံ
Pyae Sone | 10:26 AM | လတ်တလော ခံစားမှု
ကျနော်အခုတလော ဘာစာမှရေးဖြစ်မှာမဟုတ်သလို ဘယ်မှလည်း အလည်မရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလည်လာကြသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်...အလည်လာကြတဲ့အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...။ ဘလော့ဘ်ကိုတော့ ရပ်နားမှာမဟုတ်ပါဘူး ဆက်လက်ရေးသားသွားမှာပါ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စလေးတွေကြောင့်ရယ် အင်တာနက် လိုင်းပြန်တက်မဆင်ရသေးတာကြောင့်ရယ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခဏခွဲနေရအုံးမှာပါ.... ဘလော့ဘ်ဂါညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကို အစဉ်အမြဲသတိရလျှက်
အချိန် - 10:26 AM
အော် အပြေးတပိုင်းနဲ့ အသစ်တင်လို့ အမြန်လာဖတ်တာ ခလုတ်တောင် တိုက်တယ် ဒီရောက် တော့ သူကခွဲဥိးမယ်တဲ့ :'(
အမြန်ပြန်လာပါ .. :D
နှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုတာ မတွေ့တာကြာလို့ နှုတ်ဆက်တယ်လို့ ယူဆမယ်နော်။ ရတယ် အင်တာနက်မဆင်ရသေးလို့ မရေးတာဆို နားပါ။ အင်တာနက်ဆင်ပြီးရင် ပြန်ရေးပါလို့..စာဖတ်ပရိတ်သတ် လသာည '(^^;)'မှ တောင်းဆိုပါတယ်..လို့:D
အားတဲ့အချိန် အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်တွေမှ ရေးပေါ့ နော ..
စောင့်မျှော် အားပေး လျှက်ပါ ...
November 1, 2009 at 3:35 AM
ဟိဟိ အကိုပြည့်စုံ ပြည့်စုံလေးကို သတင်းပို့ဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဟေ့နော်
အခုကတည်းက ကြိုစရန်သတ်ထားတယ်ဝေ့ ခွိခွိ
မိုးပွင့်လည်း စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။ အင်တာနက်တပ်ပြီးရင်တော့ မိုးပွင့်ဆီလာလည်ဖို့မမေ့ကြေးနော်။ အကြွေးမှတ်ထားမယ်.... အဆင်ပြေပါစေ။။။။
တစ်ခါတစ်လေ မရောက်ဖြစ် နှုတ်မဆက်ဖြစ်ပေမဲ့
ခင်မင် အားပေး လျှက်ပါ ...။
ကိုပြည့်စုံရေ အမဆုမွန်လည်းနှုတ်ဆက်နေတယ် ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲဗျ
Tun Min Aung said...
hi friend , h r u ? we also fine ,why u did not help us ? as u know , how to we stay in the camp ! plz kind us we hopping u kindness so u do that! ! ! u friends , tun tun & BO BO
ပြည့်စုံရေ။ ဘယ်ဆီကို မင်းရောက်နေလဲ။ ဘယ်သူနဲ့ မင်းရှိနေမလဲ။ ဘာတွေကို မင်းလုပ်နေမလဲ ။။။ တွေးကြည့်တာပါ။ အမြန်ပြန်လာပါနော်။ ပြည့်စုံ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။ မောင်မင်းပြည့်စုံ.... အင်တာနက်လိုင်းပေါ် အမြန်ပြန်ရောက်စေ .... အမိန့်တော်....
will be waiting..... ;)
wGoh michael kors handbags on sale
gPbo GHD Pas Cher
oSlw north face clothing
9eTre cheap ugg boots uk
8rTeo michael kors bags
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ (၄၇) နှစ်ြေ...
P for Pyae Sone နှင့် ပ For ပြည့်စုံ
♫ ♪ တခါတလေမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေကို ညည်းတတ်တယ်